Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLVIII
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLVIII
Posted by Kyaemon on Jun 10, 2017 in Business & Economics, Education, Think Different, Think Tank |3comments
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths # ၄ရ XLVII မှအဆက်
ယိုးဒယားဆီမြန်မာတွေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်၊ ၅ သန်းလောက်ရှိမယ်လို့ကြားရတယ်
မလေးရှား စင်ကာပူမှာလဲ သိန်း သောင်းရှိတယ်၊ကမ႓ာအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့ပြီးနေထိုင်ကြတယ်၊
သာမန်အားဖြင့် လူတွေက တိုင်းတပါးသို့တော်ရုံတန်ရုံနဲ့မသွားကြပါ၊အလုပ်လက်မဲ့ ပြသနာ
မလေးရှားမှာလူကိုသတ်တယ်ဆိုတာကြားပေမဲ့ အလုပ်ရှိရာ အလုပ်ကောင်းဝင်ငွေကောင်းရာကိုသွား
နဲ့”စံမြန်း” ရတယ်၊ကျွန်သာသာ လောက်ပါ၊ ကျွန်ခံလူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာတွေ သိန်း /သောင်းဦးရေ ရှိမယ်လို့သိရတယ်၊
ဖြားယောင်းလိမ်ညာခဲ့တယ်၊ဒါလဲ ၃၀၀၀ဝ ခန့်ရှိကြောင်းအောက်တွင်ဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ်၊
‘Our lives are in the hands of the Lord of Death’: investigating modern-day slavery
Pulitzer ထူးချွန်ဆုကို ဒါ်Estherထူးဆန်နဲ့ အပေါင်းပါ တို့ကိုချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုကြတယ်၊
Last updated 10:21, March 26 2015
လွန်ခဲ့သော3years261 days ago က Irrawaddy တွင် ရေးသားဖေါ်ပြထားသော သတင်းဖြစ်သည်
Inside the shrimp slave trade: Migrant workers and children forced to peel seafood for 16 hoursaday in filthy Thai factories that supply retailers and restaurants in the U.S. and Europe
မစင် နံစော်နေတဲ့ကြင်ကြီးကြင်ငယ်တွေကြားမှာလုပ်ရတယ် (ကျန်းမာရေးနဲ့မညီပါ)
• 100 Burmese labourers found locked in the Gig Peeling Factory near Bangkok, most working for almost nothing
• They spent 16 hoursaday with their aching hands in ice water, ripping the guts, heads, tails and shells off shrimp
ကလေးမတဦးကပြောတာက သူတို့ကကျမတို့ကိုနားခွင့်မပေးပါ၊ညနေ ရ နာရီ မှာရပ်ပြီးနောက်တနေ့နံနက် ၃ နာရီမှာ ပန်အလုပ်စရပါတယ်၊
• One girl, 16, said: ‘They didn’t let us rest. We stopped working at 7pm. Then we would start again at around 3am’
ဒီပုဇွန်တွေကို(အနောက်နိုင်ငံက) မှတဆင့် ဥရောပနဲ့ ဩစေတလျာကုန်စုံဆိုင် ကြီးဆီပို့ပါတယ်၊
• Shrimp went into supply chains of retailers like Wal-Mart, firms that ship to Europe and Australian supermarkets
PUBLISHED: 04:11 EDT, 14 December 2015 | UPDATED: 10:52 EDT, 14 December 2015
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3358969/Inside-shrimp-slave-trade-Migrant-workers-children-forced-peel-seafood-16-hours-day-filthy-Thai-factories-supply-retailers-restaurants-U-S-Europe.html#ixzz4iPqw7M
tမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths # ၉ IX | Myanmar Gazette News Media Forum Network မှာလဲဆဝေးနွေးထားတယ်၊
“ပင်လယ်ဆီကိုရောင်းချလိုက်တယ်” ဆိုတဲ့ ဗီဒီအိုမှာ ရင်ထုမနာဝမ်းနဲ ကြကွဲစရာ
Sold to the Sea youtube//youtube.comwatch?v=ydo61Ou4Ucc
” သကွဲ” ကွဲတာထက် “ရှင်ကွဲ” ကွဲတာကပိုခံရခက်တယ်လို့ပြောကြတယ်
ကိုမြင့်နိုင်က မိမိရဲ့ဆွေမျိုးနဲ့ ၂၂ နှစ် ခွဲခွါရပြီးကျွန်လုပ်ခံရတာကကြေကွဲ
လူသူဝေးပြီးပြန်လာလမ်းမလွယ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား Benjina ကျွန်းက သံလှောင်အိမ် မှာ
အကျဉ်းချ ပိတ်ခံရတဲ့ ကိုကျော်နိုင်
ကိုလှဖြိုးက သသွား တဲ့ မန်မာတံငါသယ်ထွန်းဦးရဲ့အလောင်းကိုမြှုပ်အပြီး ကပ်ပြားရှေ့မှာရပ်နေပွံ
ကလေးကျွန်တွေရဲ့လုပ်အားနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ပုဇွန်တွေကိုနံမယ်ကြီးဖြန့်ချီရေး ၁၁ ဌာနကိုရောင်း
ယိုးဒယားစက်ရုံတခုမှကယ်တင်လိုက်တဲ့ မန်မာ “ကျွန်Slaves တွ “
Burmese as “Slaves” Rescued from Thai Factory
Tin Nyo Win and his wife, Mi San, were cursed for not peeling fast enough and called “cows” and ¬“buffalos.” They were allowed to go outside for food only if one of them stayed behind as insurance against running away”¦..
Men who have managed to escape from boats supplying CP Foods and other companies like it told the Guardian of horrific conditions, including 20-hour shifts, regular beatings, torture and ex
cution-style killings. Some were at sea for years; some were regularly offered methamphetamines to keep them going. Some had seen fellow slaves murdered in front of them.
Version:1.0 StartHTML:000000250 EndHTML:000015113 StartFragment:000013790 EndFragment:000015069 StartSelection:000014007 EndSelection:000015009 SourceURL:http://commonsensewonder.blogspot.com/2015/03/slavery-still-prevalent-in-southeast.html Commonsense & Wonder: Slavery still prevalent in southeast Asia should be the headline. When rights come from government, this is what happens.<!–
Slavery still prevalent in southeast Asia should be the headline. When rights come from government, this is what happens.
Your seafood might come fromÂ slaves
SourceURL:http://commonsensewonder.blogspot.com/2015/03/slavery-still-prevalent-in-southeast.html Commonsense & Wonder: Slavery still prevalent in southeast Asia should be the headline.
Upon its arrival, AP journalists followed trucks that loaded and drove the seafood over four nights to dozens of factories, cold storage plants and the countryâ€™s biggest fish market.
Myanmar workers load fish ontoaThai-flagged cargo ship in Indonesia.Photo: AP
“I want to go home. We all do,” one Burmese slave called out over the side of his boat,acry repeated by many men. “Our parents haven’t heard from us foralong time, I’m sure they think we are dead.”
“I’m starting to feel like I will be in Indonesia forever,” said Phyo, wipingatear away.”I remember thinking when I was digging, the only thing that awaits us here is death.”
Bangkok brothel raid reveals underage Myanmar sex worker
By AFP Thursday, 09 June 2016
ဇွန်၂၀၁၆၊ ဘန်ကောက်ပုလိပ်က ပည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုလိုက်ဖမ်းရာ
အသက် ၁၈ နှစ် အာက် ၁၂၁ ဦး အနက် ၉ဝ % (၁၀၉ဦး) ကမြန်မာပြည်မှဖြစ်ကြောင်း
SourceURL:http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/20747-bangkok-brothel-raid-reveal Bangkok brothel raid reveals underage Myanmar sex workers
A raid onalarge Bangkok brothel notorious for its “soapy massages” has found underage sex workers from Myanmar and logbooks detailing big kickbacks to corrupt cops and officials, investigators said yesterday.
During the evening raid on June7they found documents detailing alleged payments worth thousands of dollars to police and city officials.
The raid also uncovered multiple sex workers under the age of 18 inside the brothel, most of them Myanmar citizens “astark reminder of how impoverished teenage migrants continue to be lured into Thailand™s sex trade.
Ronnarong said around 90 percent of the 121 women found working in the brothel at the time of the raid were from Myanmar, primarily ethnic minority women from the two country’s border regions.
Ellen Bruno,afilmmaker and international relief worker who has spent much of the last 20 years in southeast Asia, recently released her latest film SACRIFICE -The Story of Child Prostitutes in Burma, about the lives of these girls. SourceURL:https://www.hrw.org/reports/1993/thailand/
Trafficking of Burmese Women and Girls
into Brothels in Thailand Asia WatchVersion:1.0 StartHTML:000000205 EndHTML:000000998
ယိုးဒယားမှာ မန်မာလိင်အလုပ်သမား ၂၀၀၀ဝ မှ ၃၀၀၀ဝ ရှိကြောင်း
နှစ်စဉ် ၁၀၀၀ဝ မန်မာမှတင်သွင်း (ဖြားယောင်း) လာကြောင်း
Asia Watch ကပြောပါတယ်၊
Conservative estimates of Burmese girls and women working in brothels in Thailand now range between twenty thousand and thirty thousand, with approximately ten thousand new recruits brought in each year. A non-governmental organization (NGO) monitoring the trafficking in Mae Sai estimates that an average of seven Burmese girlsaday were brought into Thailand through the Mae Sai immigration point alone in 1992.
SEX AND PROSTITUTION IN MYANMAR | Facts and Details…..
Neil Lawrence wrote in The Irrawaddy, ‘According to figures cited inarecent study by anthropologist David A. Feingold, there are as many as 30,000 Burmese commercial sex workers in Thailand,anumber believed to be “growing by some 10,000 per year.” As illegal migrants, women from Burma generally occupy the lowest rungs of the Thai sex industry. Many are confined to their brothels, with little power to insist that customers use condoms, even if they are aware of the risks of unprotected sex. But with the AIDS scare creatingastrong demand for supposedly low-risk virgins, pre-adolescent girls from Burma are commanding as much as 30,000 baht (US$700) from businessmen willing to pay for the privilege of dispensing with precautions or to “cure” themselves of the disease.[Source: Neil Lawrence, The Irrawaddy, June 3, 2003 ^]
အမောင်တို့ငကြောင်ကြီး ငကြောင်ငယ်တို့က မြစ်ဆုံရေကာတာ ကိုမလုပ်စေလို
ထုတ်မှာကို တပည့်တော်အကျွန်နုပ်ငတုံးလေးတွေကိုအနည်းငယ်မျှ “မျှပေး မ စ”နိုင်မလား
ပါရမီပြည့်စုံပြီးဘုန်းရှိန်အပြည့် ဖြတ်ထိုးဉာဏ် အပြည့်နဲ့ ဖားမင်းကြီးကမိန့်တော်မူတယ်၊
ခွင့်လွှတ်ပါဖားမင်းကြီးရယ်၊ ဟုတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုပြီးအကျွန်နုပ် ငတုံးတို့သေချာအောင်ထပ်တင်ပါရစေ၊
ဖားမင်းကြီးက ဟုတ်ပါတယ်ဆိုမှ မယုံရင် အမေရိကန်နဲ့အီးယူး သံအမတ်မင်းကြီးများကိုမေးနိုင်တယ်
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ အမြော်အမြင်ကြီးလှစွာသော ဖားမင်းကြီးရယ်၊
Motion to debate unemployment accepted
MP U Khin Cho has asked the authorities to address the 34 percent unemployment problem facing the country.
Addressing the Hluttaw meeting last Friday (May 26), he suggested thatasystematic and gradual mechanism be introduced to reduce the unemployment figure.
ဘယ်သူမဆို ကိုယ်တန်ရာပဲရတယ်… တဲ့..။
မြန်မာပြည်သူားတွေဆင်းရဲလိုက်ကြတာဆိုတော့.. ပြည်တွင်းမှာနေသူ အများစုလူထုက.. အတွေးအခေါ်တွေက.. ပြောင်းပြန်တွေဖြစ်နေတာပဲ..။
မှန်တာဖြစ်ချင်.. အခုတွေးနေကြ..လုပ်နေကြတာကို.. ပြောင်းပြန်လှန်ကြဖို့ပါပဲ..။
မြန်မာလူထု အများစုက.. ဒီလိုတွေးကြပြီ.. ဒါကိုမှန်ပြီဆိုပြီးပြောကြပြီဆို… အဲဒါရဲ့ပြောင်းပြန်လုပ်..။
ရှေးမြန်မာတွေထွင်ခဲ့တဲ့.. ကိုယ်ခံ အားကစားပဲလေ..။
230K Messi Messi, ပိုင်ံ ခန့် and 230K others
Bo Nay, Kyaw Thu Aung and 258K others